Sakhiirada oo la sheegay in ay fahmi karaan maadada Fiisigiska | Somaliska
Cilmi baaris uu sameeyay joornaalka WIRE ayaa lagu sheegay in caruurta yar ee da’dooda gaareyso 2 bilood ay awood u leeyihiin in ay fahmaan qeybo ka mid ah maadada Fiisigiska oo mardhow la fahmay.
Caruurta 2 bilood jirka ah ayaa la sheegay in ay awood u leeyihiin in ay fahmaan arimaha Fiisigiska sida waxa loo yaqaan gravity (xoogga shay walba xagga dhulka u jiida), waxay kale oo fahmi karaan haddii shay ku dhex jiro sanduuq oo haddii sanduuqa la dhaqaajiyo in shaygaas dhaqaaqayo.
Marka caruurtu ay 5 bilood jiraan ayay awood u leeyihiin in ay fahmaan farqiga u dhexeeya waxyaabaha adag iyo kuwa jilicsan. Marka 6 bilood ilaa 10 bilood ay gaaraan waxay awoodaan in ay kala gartaan xisaabinta sida kala weynaashaha alaabada iyo awooda qaadkooda.
Arintaan ayaa ka yaabisay saynisyahanada maadaama wax badan oo ka mid ah arimahaan ay ogaadeen mudo dhow oo ragg caan ah ay soo alifeen balse waxay iloobeen awooda Allahii abuuray iyaga iyo caruurta oo cilmigiisa cidii uu rabbo fahansiiya.
taas baan been aheen awooda allah wax ka ween majirto , saa waa allah cirka iyo dhulka tiirla aan tagay , wax kastana awoodo , rabiyooy adiga uun baa awood leh